खोप वितरण गर्न अमेरिकाले रोज्यो यस्ता देश, नेपाल पाउछ कि पाउदैन ? — Imandarmedia.com
खोप वितरण गर्न अमेरिकाले रोज्यो यस्ता देश, नेपाल पाउछ कि पाउदैन ?
काठमाडौं । निम्न र मध्यम आय भएका मुलुकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर आफूसँग भएको ८ करोड खोप वितरण गर्ने अमेरिकाले जनाएको छ ।
अमेरिकासँग भएको खोपका लागि संसारभरबाट अनुरोध आएपछि कसलाई प्राथमिकता दिने भन्‍नेमा अमेरिका दबावमा थियो । यद्यपि निम्न र मध्यम आय भएका मुलुकलाई प्राथमिकता राख्नेमा सैद्धान्तिक निष्कर्षमा अमेरिकी अधिकारी पुगेका छन् ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमसँग कुराकानी गर्दै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको ग्लोबल कोभिड रेस्पोन्स एण्ड हेल्थ सेक्युरीका ग्याले इ स्मिथले अमेरिका मध्यम र निम्न आय भएका मुलुकलाई खोप दिने विषयमा केन्द्रित भएको बताएकी छन्। उनले भनेकी छन्, ‘हामीले अहिले खोप वितरणका सम्बन्धमा निर्णय गरिसकेका छैनौं । तर हामीले विश्वको हरेक क्षेत्रलाई नजिकबाट हेरिरहेका छौं ।’
उनले खोपको आपूर्तिका लागि जी-७ मुलुकहरुसँग कुराकानी गरिरहेको समेत बताएकी छन् । पछिल्लो समय नेपाल लगायतका भारतका छिमेकी मुलुकमा बढ्दो संक्रमण र भ्याक्सिनको अभावका सम्बन्धमा अमेरिकाले विशेष चासो दिएको छ । उनले भारतका छिमेकी मुलुकहरुमा बढिरहेको आपत्कालीन अवस्थाको बारेमा समेत आफूहरुले नजिकबाट हेरिरहेको बताइन् ।
विश्वको सबैभन्दा बढी खोप उत्पादन गर्ने मुलुक भारतले आफ्नो उत्पादनलाई घरेलु प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गरेपछि यतिबेला अमेरिकामाथि संसारभरीबाट दबाव छ । विश्वभरबाट माग बढेपछि अमेरिकाले खोप उत्पादनलाई बढाउने तयारी गरेको छ ।
पहिला आफूसँग रहेको ६ करोड खोप वितरण गर्ने घोषणा गरेको अमेरिकाले दुई दिन अगाडि मात्र थप दुई करोड वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । अमेरिकी अधिकारीहरुका अनुसार त्यसलाई अझ नबढाएमा विश्वव्यापी रुपमा आएको माग पूरा गर्न सकिंदैन ।
अमेरिकी राजनीतिज्ञ, नागरिक समाज र मिडियाले त्यहाँको नेतृत्वलाई विश्वव्यापी खोप अभियान सन्चालन गर्न दवाव दिइरहेका छन् । यस्तै चीनको तिब्बत सरकारले नेपाललाई १५० सिलिन्डर लिक्विड अक्सिजन दिएको छ ।
बिहीबार बिहान तिब्बत सरकारले ल्हासामा आयोजित एक कार्यक्रमा उक्त सिलिन्डर नेपाली महावाणिज्यदूत नवराज ढकाललाई हस्तान्तरण गरेको हो । ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत ढकालले उक्त सिलिन्डर बिहीबार बिहानै नेपालका लागि हिँडेको जानकारी दिएका छन् ।
१५० सिलिन्डर लिक्विड अक्सिजनबाट ४० केजी क्षमताका करिब ६ हजार सिलिन्डर भर्न सकिने पनि ढकालले बताएका छन् । त्यस्तै तिब्बत सरकारले छिट्टै २ सय थान आईसीयू बेड, ५ थान भेन्टिलेटर र १० थान कन्सनट्रेटर दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तिब्बतले स्थलमार्गबाट कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका सामग्री लिएर आउने कार्गोलाई बिनारुकावट पठाउने हरसम्भव प्रयास गर्ने वचन दिएको पनि ढकालले बताए ।
त्यस्तै शानशीस्थित एक कम्पनीले दिएको ३० वटा अक्सिजन कन्सनट्रेटर शुक्रबार सिल्क ट्रान्सपोर्टमार्फत पठाइने पनि उनले जानकारी दिएका छन् । त्यस्तै तिब्बतको गुडविल फाउन्डेसनले ५० वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर दिने तयारी गरेको उनले बताए ।
निजी क्षेत्रबाट कोरोनासम्बन्धी सामग्री बोकेका २२ वटा गाडी तातोपानी भन्सार पुग्ने चरणमा रहेको र अक्सिजन सिलिन्डर कन्सनट्रेटरलगायतका स्वास्थ्य सामग्री बोकेका करिब १५ वटा गाडी खासा आइपुगेका छन् ।
त्यस्तै निजी क्षेत्रको एभरेस्ट ग्यासले पनि ४ हजार ५ सय वटा अक्सिजनका खाली सिलिन्डर नेपाल भित्र्याउन लागेको र ती सिलिन्डर यसै साता तिब्बत आइपुग्ने उनको भनाइ छ । विभिन्न सहयोग जुटाउन र अन्य समन्वय कार्यका लागि चीनको तिब्बत सरकारसँग महावाणिज्य दूतावास निरन्तर सम्पर्कमा रहेको पनि ढकालले बताए ।
कोरोना भाइरस सङ्क्रमित बिरामीले सङ्क्रमणमुक्त भएको कति समयपछि खोप लगाउने ? ठ्याक्कै यति नै समय भन्ने उत्तर कसैसँग छैन । तर भारतीय विज्ञहरूले तीन महिनापछि खोप लिनु राम्रो हुने जनाएका छन् ।